13 Nov,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက်
၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ကျန်းမာရေး လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တွင် ဆေးဝါးသိပ္ပံဘွဲ့လွန် သင်တန်းများသို့ ပူးတွဲစာရင်းပါ ပုဂ္ဂိုလ်များကို တက်ရောက်ခွင့်ပြုကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။
၁။ ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူသင်တန်းနှင့် ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံသင်တန်းကို ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တွင် (၂-၁-၂၀၂၀) (ကြာသပတေးနေ့) မှစ၍ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများသည် မိမိတို့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည့် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တွင် (၂၇-၁၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်ထားသော သင်တန်းကြေးများ ပေးသွင်းမှတ်ပုံတင်ကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (၁၀-၁-၂၀၂၀) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ မှတ်ပုံတင်ကြရမည်။
၃။ သင်တန်းသားတစ်ဦးချင်းအတွက် သီးခြားအကြောင်းကြားစာ ပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ။
25 Oct,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် ပထမနှစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရသူများစာရင်း
ဆေးဝါးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်သင်တန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက် (တနင်္လာနေ့)တွင် ဖွင့်လှစ်မည်။
ဝင်ခွင့်ရကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၏ မော်ကွန်းထိန်းထံသို့ (၁-၁၁-၂၀၁၉)ရက် (သောကြာနေ့) မှစတင်၍ သတင်းပို့ရမည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ထားသည့် အမှတ်စာရင်းမူရင်း၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း)တို့ကို ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်သို့ တင်ပြရမည်။
(၂၉-၁၁-၂၀၁၉)ရက် (သောကြာနေ့)အထိ သတင်းပေးပို့ ကျောင်းအပ်ခြင်းမရှိသူများအား ဝင်ခွင့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။
18 Oct,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၈)ရက်
၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်၊ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့နှင့် ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ၏ ဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းကို ပူးတွဲပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။
၁။ လူတွေ့နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးရန်အတွက် သီးခြားခေါ်စာပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ။
၂။ လူတွေ့နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးခြင်းကို ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်၍ သတ်မှတ်ကြေညာထားသည့် နေ့ရက်နှင့်အချိန်အတိုင်း မပျက်မကွက် ရောက်ရှိသတင်းပေးပို့ကြရမည်။
(သတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်နှင့် အချိန်အတွင်းရောက်ရှိ သတင်းပို့ဖြေဆိုခြင်း မရှိသူတို့ကို လုံးဝစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။)
သင်တန်းအမည် ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်/အချိန် သတင်းပို့ရောက်ရှိရမည့်အချိန်
ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ (၂၄.၁၀.၂၀၁၉)နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ ၉:၀၀နာရီ
ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (၂၄.၁၀.၂၀၁၉)နံနက်(၁၀:၃၀)နာရီ ၉:၀၀နာရီ
၃။ လူတွေ့နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးမည့်နေ့တွင် ပညာအရည်အချင်းအတွက် ဘွဲ့လက်မှတ်(မူရင်း)၊ အောင်မြင် ခဲ့သောသင်တန်းများအတွက် သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်(မူရင်း)များ၊ လိုအပ်သောအထောက်အထား (မူရင်း)နှင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို မိမိနှင့်အတူ တပါတည်း မပျက်မကွက် ယူဆောင်လာကြရမည်။
4 Oct,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
Test-2 Marks, Third Year, B.Pharm. (1/2019)
27 Sep,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
Test-2 Marks of Final Year, B.Pharm. (1/2019)
25 Sep,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
Marks for Second Year, B.Pharm. (1/2019)
Test-2 Marks (29.8.2019)
Applied Test (11.9.2019)
23 Sep,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
M.Pharm., Ph.D. (2020) Entrance Exam_ Estimated Number for Selection
၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့လွန်သင်တန်းနှင့် ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းများသို့ ဝင်ခွင့်လျားထားဉီးရေစာရင်း
မှတ်ချက်။ ။ ဘွဲ့လွန်ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအလိုက် တက်ရောက်ခွင့်ပြုမည့် လျာထားဦးရေ သတ်မှတ်ချက်တွင် အများဆုံးလက်ခံသင်ကြားပေးနိုင်မည့် ဦးရေမည်မျှရှိစေကာမူ သတ်မှတ်အရည်အချင်း ရမှတ်ပြည့်မီခြင်းမရှိက ရွေးချယ်မည်မဟုတ်ကြောင်း တစ်ပါတည်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
19 Sep,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
M.Pharm., Ph.D. (2020) Entrance Exam_Exam Roll Number
ဘွဲ့လွန်သင်တန်း ဖြေဆိုမည့်ရက် ဘာသာရပ် အချိန်
ဆေးဝါးပါရဂူသင်တန်း ၂၆-၉-၂၀၁၉ (ကြာသပတေးနေ့) အင်္ဂလိပ်စာ (၉) နာရီမှ (၁၁) နာရီထိ
ကျွမ်းကျင်ဘာသာရပ် (၁၃) နာရီမှ (၁၆) နာရီထိ
ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံသင်တန်း ၂၇-၉-၂၀၁၉ (သောကြာနေ့) အင်္ဂလိပ်စာ (၉) နာရီမှ (၁၁) နာရီထိ
ကျွမ်းကျင်ဘာသာရပ် (၁၃) နာရီမှ (၁၅) နာရီထိ
စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို ဤတက္ကသိုလ်၏ ကျောင်းသားရေးရာဌာနတွင် (၁၆-၉-၂၀၁၉) (တနင်္လာနေ့) တွင် စတင်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
22 Jul,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
Chapter End Test (24.6.2019) Marks For Third Year, B.Pharm. (1/2019)
12 Jul,2019 BY uopyrector POSTED IN Announcements
M.Pharm. and Ph.D. (2020) Entrance Exam
M.Pharm., PhD entrance (2020).pdf
"၂၀၂၀ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်၊ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့(M.Pharm.) သင်တန်းအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း"
၁။ ၂၀၂၀ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်အတွက် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံ
(M.Pharm.) ဘွဲ့သင်တန်းများသို့ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ လျှောက်ထားနိုင် ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (M.Pharm.) သင်တန်းများ
က။ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (ဆေးဝါးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒ) (၂) နှစ်
ခ။ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (ဆေးဝါးဖော်စပ်ရေးဗေဒ) (၂) နှစ်
ဂ။ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (ပရဆေးဗေဒ) (၂) နှစ်
ဃ။ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (ဆေးလက်တွေ့ဆေးဝါးသိပ္ပံ) (၃) နှစ်
(ခ) ဆေးဝါးသိပ္ပံဘွဲ့ (B.Pharm.) ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
(ဂ) လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်တွင် လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ လုပ်သက် (၁)နှစ် ပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ရမည်။
(ဃ) လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၅၀)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
(င) ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိပြီးပါက အနည်းဆုံး(၅)နှစ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
(စ) သတ်မှတ်ထားသော သင်တန်းကာလကို အချိန်ပြည့်တက်ရောက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
၃။ လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြပါရှိရမည်-
(က) အမည်၊နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ လက်ရှိရာထူး/ဌာန၊ အမြဲတမ်းလိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊
(ဂ) အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်စတင်ထမ်းဆောင်သည့် နေ့ရက်/လ/ခုနှစ်နှင့် အမှုထမ်းသက်၊
(ဃ) အသက်နှင့်မွေးသက္ကရာဇ်၊ (အသက်ထောက်ခံစာတင်ပြရမည်။)
(ဆ) အမှုထမ်းသက် မှတ်တမ်းအပြည့်အစုံ၊ (ခက်ခဲဒေသတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါက၊ ဌာနဆိုင်ရာ ထောက်ခံစာနှင့်အတူ တစ်ပါတည်းတင်ပြရမည်။)
(ဇ) ယခင်ပြည်တွင်းဘွဲ့လွန်သင်တန်းတစ်ခုခု တက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံရဖူးခြင်းရှိ/မရှိ ၊
(စျ) ပြည်တွင်းဘွဲ့လွန်သင်တန်းတစ်ခုခု တက်ရောက်ခဲ့ဖူးပါက တက်ရောက်ခဲ့သည့် ရက်၊လ၊ခုနှစ် သင်တန်း၊ဘာသာရပ်နှင့် ဘွဲ့ရခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိ၊
(ည) ပြည်တွင်း/ ပြည်ပသင်တန်းတစ်ခုခုသို့ တက်ရောက်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုထားခြင်းရှိ/မရှိ။
၄။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲပေးပို့ရမည်-
(က) လျှောက်လွှာတွင်ဖော်ပြထားရှိသည့် အချက်အလက်များသည် မှန်ကန်မှုရှိပါကြောင်း ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောခံဝန်ချက်၊
(ဂ) ဆေးဝါးသိပ္ပံသင်တန်း အမှတ်စာရင်း (Grading Certificate) မိတ္တူ၊
(ဃ) ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ(လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ) (လွန်ခဲ့သော ၆လအတွင်း ရိုက်ကူးသည့်ပုံဖြစ်ရမည်။)
(င) အသက်ထောက်ခံစာ(သို့မဟုတ်)တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊
(စ) ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်၏ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင်ဖွင့်လှစ် ထားသော ငွေစာရင်းအမှတ် (MD-010318) သို့ ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံသင်တန်း
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကြေး ၁၀၀ဝိ/- (ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ)ကို ပေးသွင်းထားသည့် ချလံမူရင်း(၁)စောင်။
(မှတ်ချက်။ မြို့နယ်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ဘဏ်ခွဲများမှတဆင့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ ငွေစာရင်းအမှတ် (MD-010318) သို့ လိပ်မူ၍ ငွေလွှဲစနစ်ဖြင့်လည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။)
၅။ လျှောက်လွှာကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူး မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း
အကြီးအမှူး၏ ထောက်ခံချက်ပါရှိရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့် လျှောက်လွှာများကို လုံးဝ ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
၆။ ကြိုတင်မိတ္တူတစ်စောင်ကို ငွေသွင်းချလံမူရင်းနှင့် တကွ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန် သို့ မပျက်မကွက်ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။
၇။ လျှောက်လွှာများကိုဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်သို့(၂၃.၈.၂၀၁၉)ရက်(သောကြာနေ့)နောက်ဆုံး ထား၍ပေးပို့ရမည်။ မပြည့်စုံသည့် လျှောက်လွှာများနှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက်
နောက်ကျရောက်ရှိသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၈။ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို (၁၆.၉.၂၀၁၉) ရက် (တနင်္လာနေ့)မှစ၍ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် ကျောင်းသားရေးရာဌာန၌ ထုတ်ပေးမည်။
၉။ သင်တန်းဝင်ခွင့် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို (၂၇.၉.၂၀၁၉)ရက် (သောကြာနေ့)တွင် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၌ အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပ
စဉ် ဘာသာရပ် စစ်ဆေးမည့်အချိန် မေးခွန်းပုံစံ
(က) အင်္ဂလိပ်စာ (၀၉:၀၀) နာရီမှ (၁၁:၀၀) နာရီထိ
(ခ) ကျွမ်းကျင်ဘာသာရပ် (၁၃:၀၀) နာရီမှ (၁၅:၀၀) နာရီထိ M.C.Q
၁၀။ လူတွေ့နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးမည့်ရက်ကို လူတွေ့နှုတ်ဖြေ၊ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် အချိန်တွင် ဖော်ပြပါမည်။
၁၁။ သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများသည် ဘွဲ့လွန်သင်တန်း စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် မိမိ
တာဝန်ကျရာ မည်သည့်ဒေသတွင်မဆို ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကတိခံဝန်ချုပ် ချုပ်ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
၁၂။ သင်တန်းတက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ခံရပြီးမှသင်တန်းတက်ရောက်ရန်ပျက်ကွက်လျှင် နောင်ပညာသင်နှစ် (၂)နှစ် ပြည်တွင်း/ပြည်ပဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသို့ လျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ။
၁၃။ သင်တန်းတက်ရောက်ရန် ရွေးချယ်ခံရပြီး၊ တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ပြန်ပြီးမှ သင်တန်းကို မတက်ရောက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ (မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုသည်ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ)၊ သင်တန်းကို
ပြီးဆုံးအောင် မတက်ရောက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိုင်း နိုင်ငံ့တာဝန်ကို မထမ်းဆောင်လျှင်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသော လျော်ကြေး ငွေကို ပေးလျော်ရမည်။
၁၄။ သင်တန်းအလိုက် တက်ရောက်ခွင့်ပြုမည့် လျာထားဦးရေ သတ်မှတ်ချက်ကို ဤတက္ကသိုလ်၏ Website မှတစ်ဆင့်ကြေညာပါမည်။လျာထားဦးရေ မည်မျှရှိစေကာမူ သတ်မှတ်
အရည်အချင်း ရမှတ်မပြည့်မီပါက ရွေးချယ်ခြင်းမပြုပါ။
၁၅။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ Website: www.uopygn.gov.mm နှင့် www.uopygn.edu.mm တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။(သို့မဟုတ်) ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် ၏ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁-၉၆၉၉၈၇၇၊၀၁-၉၆၉၀၄၈၅) သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
"၂၀၂၀ခုနှစ် ပညာသင်နှစ် ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ (Ph.D.) သင်တန်းအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း"
၂၀၂၀ခုနှစ် ပညာသင်နှစ်အတွက် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ (Ph.D.)သင်တန်းများသို့ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ (Ph.D.) သင်တန်းများ
က။ ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ (ပရဆေးဗေဒ) (၃) နှစ်
ခ။ ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ (ဆေးဝါးဘက်ဆိုင်ရာဓါတုဗေဒ) (၃) နှစ်
ဂ။ ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ (ဆေးဝါးဖော်စပ်ရေးဗေဒ) (၃) နှစ်
ဃ။ ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူဘွဲ့ (ဆေးလက်တွေ့ဆေးဝါးသိပ္ပံ) (၃) နှစ်
Ph.D. (Clinical Pharmacy)
(ခ) ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (M.Pharm.) ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
(ဂ) လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်တွင် ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် ခွင့်ရက်မပါ လုပ်သက် (၂)နှစ်ပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ရမည်။
(ဃ) ပြည်ပ၌ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဘွဲ့လွန်ရရှိပြီးမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူသင်တန်းသို့ လျှောက်ထားလိုပါက လျှောက်လွှာ ပိတ်သည့်ရက်တွင် လုပ်ငန်းစတင်ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှစ၍ ခွင့်ရက်မပါ စုစုပေါင်းလုပ်သက်(၄)နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
(င) လျှောက်လွှာပိတ်သည့်ရက်တွင် အသက်(၅၀)နှစ်ထက်မကျော်လွန်သူဖြစ်ရမည်။
(စ) ပါရဂူဘွဲ့ရရှိပြီးပါက အနည်းဆုံး(၅)နှစ် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါအချက်များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြပါရှိရမည်-
(က) အမည်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊လက်ရှိရာထူး/ဌာန၊အမြဲတမ်းလိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်၊
(ဃ) အသက်နှင့် မွေးသက္ကရာဇ် (အသက်ထောက်ခံစာတင်ပြရမည်)၊
(စ) တက်ရောက်လိုသည့်သင်တန်း (အတိအကျဖော်ပြရန်)၊
(ဇ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပသင်တန်းတစ်ခုခုသို့ တက်ရောက်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း (သို့မဟုတ်) ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊
လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲပေးပို့ရမည်-
(ဂ) ဆေးဝါးသိပ္ပံသင်တန်းနှင့်ဆေးဝါးမဟာသိပ္ပံသင်တန်းအမှတ်စာရင်း (Grading Certificate) မိတ္တူများ
(ဃ) ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ(လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ) (လွန်ခဲ့သော ၆လအတွင်း ရိုက်ကူးသည့်ပုံ ဖြစ်ရမည်။)
(စ) ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ငွေစာရင်းအမှတ် (MD-010318) သို့ ဆေးဝါးသိပ္ပံပါရဂူ ဘွဲ့သင်တန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ ၁၀၀ဝိ/-(ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ)ကို ပေးသွင်းထားသည့် ချလံမူရင်း (၁)စောင်။
(မှတ်ချက်။ မြို့နယ်မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ဘဏ်ခွဲများမှတစ်ဆင့်မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်ရှိ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ ငွေစာရင်းအမှတ် (MD-010318) သို့ လိပ်မူ၍ ငွေလွှဲစနစ် ဖြင့်လည်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။)
လျှောက်လွှာကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာန ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူး၏ ထောက်ခံချက် ပါရှိရမည်။ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လျှောက်ထားခြင်းမရှိသည့် လျှောက်လွှာများကို လုံးဝထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း မပြုပါ။
ကြိုတင်မိတ္တူတစ်စောင်ကို ငွေသွင်းချလံမူရင်းနှင့်တကွ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်ထံ လိပ်မူ၍ မပျက်မကွက် ပေးပို့ရမည်။
လျှောက်လွှာများကို ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်သို့ (၂၃.၈.၂၀၁၉) ရက် (သောကြာနေ့) နောက်ဆုံး ထား၍ ပေးပို့ရမည်။ မပြည့်စုံသည့်လျှောက်လွှာများနှင့် လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက် နောက်ကျ ရောက်ရှိသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။
စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို (၁၆.၉.၂၀၁၉) ရက် (တနင်္လာနေ့) မှစ၍ ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် ကျောင်းသားရေးရာဌာန၌ ထုတ်ပေးမည်။
သင်တန်းဝင်ခွင့်အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို (၂၆.၉.၂၀၁၉)ရက်(ကြာသပတေးနေ့)တွင် ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်၌ အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်။
(ခ) ကျွမ်းကျင်ဘာသာရပ် (၁၃:၀၀) နာရီမှ (၁၆:၀၀) နာရီထိ Essay Type
လူတွေ့နှုတ်ဖြေ စစ်ဆေးမည့်ရက်ကို လူတွေ့နှုတ်ဖြေ၊ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် အခါတွင် ဖော်ပြပါမည်။
သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူများသည် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် မိမိတာဝန်ကျရာ မည်သည့်ဒေသတွင်မဆို ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆို ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းတက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ခံရပြီးမှသင်တန်းတက်ရောက်ရန်ပျက်ကွက်လျှင် နောင်ပညာသင်နှစ် (၂)နှစ် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသို့ လျှောက်ထားခွင့်မရှိပါ။
သင်တန်းတက်ရောက်ရန်ရွေးချယ်ခံရပြီး၊ တက်ခွင့်ရစာရင်းထုတ်ပြန်ပြီးမှ သင်တန်းကို မတက် ရောက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ (မှတ်ပုံတင်ခြင်းပြုသည်ဖြစ်စေ၊ မပြုသည်ဖြစ်စေ)၊ သင်တန်းကိုပြီးဆုံးအောင် မတက်ရောက်လျှင်ဖြစ်စေ၊ သင်တန်းအောင်မြင်ပြီးနောက် သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတိုင်း နိုင်ငံ့ တာဝန်ကို မထမ်းဆောင်လျှင်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသော‌လျော်ကြေးငွေကို ပေးလျော်ရမည်။
သင်တန်းအလိုက် တက်ရောက်ခွင့်ပြုမည့် လျာထားဦးရေသတ်မှတ်ချက်ကို ဤတက္ကသိုလ်၏ Website မှ တစ်ဆင့်ကြေညာပါမည်။ လျာထားဦးရေ မည်မျှရှိစေကာမူ သတ်မှတ်အရည်အချင်း ရမှတ်မပြည့်မီပါက ရွေးချယ်ခြင်းမပြုပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ရန်ကုန်၏ Website: www.uopygn.gov.mm နှင့် www.uopygn.edu.mm တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်) ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၏ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁-၉၆၉၉၈၇၇၊ ၀၁-၉၆၉၀၄၈၅)သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။